DHEGEYSO-Ciidamo katirsan kuwa badda Puntland oo ku baxay deegaamo dhowr ah.	Garoowe, Mar 27 2017-Dowladda Puntland ayaa shaaca ka qaaday in cutubyo katirsan ciidankeeda ay u dirtay xeebaha gobolada Bari, Karkaar, Nugaal iyo Mudug kadib markii laga dareemay dhaqdhaqaaqyo xiriir l
DHEGEYSO-Ra'iisul wasaaraha oo Muqdisho ka furay wado muhiim ah.	Muqdisho, Mar 27 2017-Ra’iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xasan Cali kheyre ayaa maanta xariga ka jaray wadada Digtoor ka dare oo dhawaan maamulka Gobolka Banaadir uu ku sameeyay dib u dhis.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Xulashada Daljir iyo Khadar Cawl.	Boosaaso, Mar 27 2017-Kulan wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkii duhurnimo ee Xulashada Daljir, waxaana magaalada Boosaaso ka soo jeedinaya Weriye Khadar Cawl Ismaaciil.
DHEGEYSO-Siyaasi Bangax oo gorfaynaya xukuumadda magacaaban ee Soomaaliya.	Boosaaso, Mar 27 2017-Golaha shacabka eedawladda federaalka ayaa looga cabsi qabaa in ay celiyaan xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xasan Khayre, taasoo ka kooban 67 xubnood.
Duqayntii dooni ay saaraayeen Soomaali ku sugnaa Yemen oo lagu sifeeyey dembi dagaal.	Sida muuqata weerarkii ay xulafada uu Sacuudiga hogaaminayo ku qaaday doon dad rayid ah oo Soomaali ah marineysay xeebta Yaman, ayaa muujinaya baahida loo qabo isla xisaabtan, iyadoo colaadda hubaysan ee
Sawirro-Madaxweyne Gaas oo lakulmay nabadoonada gobolka Nugaal.	Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kulan kula yeeshay Qasriga Madaxtooyada Magaalada Garoowe Nabadoonada, Cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Nugaal, kulanka ayaa waxaa lagag
Garoowe, Mar 27 2017-Dowladda Puntland ayaa shaaca ka qaaday in cutubyo katirsan ciidankeeda ay u dirtay xeebaha gobolada Bari, Karkaar, Nugaal iyo Mudug kadib markii laga dareemay dhaqdhaqaaqyo xiriir laleh falal burcad...
Muqdisho, Mar 27 2017-Ra’iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xasan Cali kheyre ayaa maanta xariga ka jaray wadada Digtoor ka dare oo dhawaan maamulka Gobolka Banaadir uu ku sameeyay dib u dhis.
Boosaaso, Mar 27 2017-Kulan wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkii duhurnimo ee Xulashada Daljir, waxaana magaalada Boosaaso ka soo jeedinaya Weriye Khadar Cawl Ismaaciil.
Boosaaso, Mar 27 2017-Golaha shacabka eedawladda federaalka ayaa looga cabsi qabaa in ay celiyaan xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisay ra'iisul wasaare Xasan Khayre, taasoo ka kooban 67 xubnood.
Duqayntii dooni ay saaraayeen Soomaali ku sugnaa Yemen oo lagu sifeeyey dembi dagaal.
Sida muuqata weerarkii ay xulafada uu Sacuudiga hogaaminayo ku qaaday doon dad rayid ah oo Soomaali ah marineysay xeebta Yaman, ayaa muujinaya baahida loo qabo isla xisaabtan, iyadoo colaadda hubaysan ee dalkaasi ay hadd...
Sawirro-Madaxweyne Gaas oo lakulmay nabadoonada gobolka Nugaal.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kulan kula yeeshay Qasriga Madaxtooyada Magaalada Garoowe Nabadoonada, Cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Nugaal, kulanka ayaa waxaa lagaga arrin sanayey a...
Sawirro-Xeerka carruurta dayac...
MAQAAL-Sideed arrimood oo barl...